भिडियो Archives - नेपाल आज
भारतमै मैले भने, ‘संसारको सबैभन्दा ठूलो कुनै युद्ध अपराधि छ भने त्यो नरेन्द्र मोदी नै हो’ (भिडियोसहित)
Posted on: April 24, 2017Posted by: धुर्ब रिजाल
वैशाख– ११ । राजनीतिमा सटिक विश्लेषण र कतिपय नेताहरुलाई तिखो आलोचना गर्ने मानवअधिकारकर्मी तथा राजनीतिक विश्लेषक सुवोधराज प्याकुरेलले नेपालमा भारतले जासुसी र नेता खरिद गर्नका लागि सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने बताएका छन् । उनको मतमा संसारकै राजदूतावासहरुमध्ये नेपालमा भएको भारतीय दूतावासले सबैभन्दा बढी खर्च गर्छ । नेपालमा रहेको दूतावासमा काम गर्ने भारतीय कर्मचारीले हिसाब देखाउन […]
देश टुक्रा पार्छौं भन्नेहरुसँग पनि माओवादी नरम छ (भिडियोसहित)
Posted on: April 23, 2017Posted by: धुर्ब रिजाल
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालको मतमा अब नेपालको राजनीतिको पाना यति धेरै अगाडि बढीसक्यो कि फेरि राजतन्त्र फर्किने कुनै गुञ्जायस छैन । राजतन्त्र फर्किने अवस्था नभए पनि राष्ट्रियता, अखण्डतामा चुनौति दिने तत्वहरु भने नेपालमा छन भन्ने नेता नेपालको दाबी छ । उनको मतमा सबैभन्दा खतरनाक त माओवादी नै छ । यो पार्टीले विखण्डनकारीसँग […]
मधेसका सिमित जातले सबै मधेसीको हक खोसेर खाएका छन् (भिडियोसहित)
वैशाख–१० । सुवोधराज प्याकुरेल राजनीतिक विषयमा तिखो टिप्पणी गर्ने मानवअधिकारकर्मी हुन भन्दा फरक नपर्ला । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र –इन्सेकका अध्यक्ष प्याकुरेलले नेकपा एमालेको आठौं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका थिए । नेपालमा हुन लागेको निर्वाचन, मधेसी अधिकार, मधेसी दललगायत विषयमा प्याकुरेलसँग केही दिन अघि नेपालआजले कुराकानी गरेको थियो । कुराकानीका क्रममा उनले स्थानीय तहको […]
मोर्चाको चाहना संविधान जारी नै हुन नदिने थियो, अब बिथोल्ने, रोक्ने नियत देखियो (भिडियोसहित)
चैत–६ । नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालले मधेसी मोर्चा नआए पनि निर्वाचन सफल हुने बताएका छन् । नेपालआजसँगको कुराकानीका क्रममा मधेसी मोर्चाको नियत सुरुदेखि नै मुलुक बिथोल्ने मात्रै भएको जिकिर नेता नेपालको छ । नेता नेपालले भने, ‘उहाँहरुको त संविधान जारी हुनै नदिने योजना थियो । तर जारी भयो । फेरि संशोधनको कुरा गर्नुभयो । […]
Posted on: April 17, 2017April 18, 2017Posted by: netra
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालको नेता माधवकुमार नेपालले राष्ट्रपति विदेश जाँदा र आउँदा दिइने विदा बन्द गर्नु पर्ने बताएका छन् । उनले नेपाल आजको विषेश कुराकानीका क्रममा नेपालमा सार्वजनिक विदा धेरै भएका कारण राष्ट्राध्यक्ष राजकीय भ्रमणमा विदेश जाँदा दिइने विदालगायतका अन्य धेरै कटौती गर्नु पर्ने बताएका हुन् । सार्वजनिक विदा आर्थिक विकासको काममा जुट्नु पर्ने भएकाले […]
मृतकको परिवारको प्रश्न–दिनदहाडै सुधार गृहमै हत्या हुदाँ त्यहाँको कर्मचारी के हेरेर बसे ? (भिडियोसहित)
Posted on: April 16, 2017April 16, 2017Posted by: मिलन गुरागाईं
टिचिङ अस्पताल महाराजगन्ज काठमाडौं स्थित पोष्टमार्टन विभागमा पदम बहादुर पौडेलको पोष्ट मार्टन गर्न ल्याइएको छ । पौडेलको मृत्यु नभएर हत्या भएको भन्दै मृतका आफन्तहरु अस्पताल परिसरमा जम्मा भएका छन् । महोत्तरी गौरीवासका पदम बहादुर पौडेलको जीवन शैली सुधार गृहमा शंकास्पद मृत्यु भएपछि उनको लाशलाई पोष्टमार्टन गर्न महाराजगन्ज ल्याइएको हो । मृतकका आफन्तहरु प्रश्न गर्छन्– ‘सुधार […]
घुमाउने बहानामा सपरिवारलाई भोटेकोशीमा हालिदिने योजना थियो, तर सकिनँ (भिडियोसहित)
Posted on: April 16, 2017April 17, 2017Posted by: मिलन गुरागाईं
समाजसेवामा सम्पती सकाएका गौतमको मनै छुने कथा
दूनियाँले निर्मम प्रहार गरे, अन्तिममा मोहन रेग्मीले नै दिए कञ्चनलाई ११ लाख (भिडियोसहित)
Posted on: April 2, 2017April 5, 2017Posted by: मिलन गुरागाईं
बहुचर्चित ‘कञ्चन शर्मा भर्सेस मोहन रेग्मी’ प्रकरण पारिवारिक मिलेमतोमा टुंिगएको छ । कञ्चन रेग्मीको पूर्वपती मोहन रेग्मीले ११ लाख रुपैयाँ कञ्चनको जीवन सुरुक्षाको लागि भन्दै हस्तान्तरण गरेपछि यो प्रकरण टुगिएको हो । पाँच वर्ष अघि नै सम्बन्ध विच्छेद भइसकेको भए पनि कञ्चनका पूर्वपति मोहन रेग्मीले ‘मानवताको नाता’ भन्दै ११ लाख रुपैयाँ आज आइतबार घट्टेकुलोस्थित पत्रकार […]
यस्तै हो भने नयाँ शक्तिमा हिसिला मात्रै बाँकी हुन्छिन् (भिडियोसहित)
Posted on: April 2, 2017April 6, 2017Posted by: धुर्ब रिजाल
संविधन नै असफल पार्न खोज्ने बाबुरामको मिसन हामीले बुझ्न सकेका छैनौं ।
लालबाबु भन्छन्, ‘दक्षिणको हावाले बाबुराम भट्टराई धेरै हल्लिनु हुन्छ’(भिडियोसहित)
Posted on: April 1, 2017April 6, 2017Posted by: धुर्ब रिजाल
चैत–१९ । नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डितले नयाँ शक्तिका संयोजक बाबुराम भट्टराईले चुनावपछि दिल्ली तिरै बसाईं सर्ने अवस्था आउने बताएका छन् । निर्वाचन स्थगनको माग राख्दै आएका नयाँ शक्तिका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईको नाम नै किटान गर्दै नेता पण्डितले भने, ‘निर्वाचनविरोधी कुरा गर्ने हो भने भट्टराईजी चुनावपछि दिल्लीतिरै बसाई सर्नु हुने हो कि […]
नयाँ शक्तिले गर्ने खर्च कहाँबाट आउँछ ? मैले थाहा पाउन सकिनँ (भिडियोसहित)
Posted on: March 31, 2017April 6, 2017Posted by: धुर्ब रिजाल
चैत १८ । नयाँ शक्ति पार्टीले हालै चुनावको पक्षमा रहेर विज्ञप्ति निकाल्ने आफ्ना चार केन्द्रीय सदस्यलाई कारबाही गरेको छ । संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र नयाँ शक्ति पार्टीले चुनाव स्थगनको माग गर्दै केही समय अघि एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । विज्ञप्ति जारी भएपछि सो निर्णयमा असहमति जनाउँदै नयाँ शक्तिका केही नेताहरुले चुनाव बिथोल्ने […]
१२ केजी तौल र साढे २ फिटका पूर्वशिक्षक कृष्णप्रसादले कसरी गरे ४२ वर्ष अध्यापन ? (भिडियोसहित)
Posted on: March 30, 2017April 6, 2017Posted by: netra
कृष्णप्रसादको मर्मस्पर्शी कथा पुरा पढ्नुहोस
Posted on: March 28, 2017April 6, 2017Posted by: धुर्ब रिजाल
नेपालआजसँगको पहिलो अन्तर्वार्तापछि चर्चाको शिखरमा पुगेका नयाँ शक्तिका नेता तथा कृषि बैज्ञानिक मदन रार्इले यौनबारेको उदार धारणामा कुनै परिवर्तन गर्न नसक्ने दोहोर्याएका छन् । पहिलो अन्तर्वार्ताले धेरै पाठ सिकाएको बताउने राईले आफूलाई फासीको सजाय दिने फैसला कतैबाट भए पनि बोल्न चाहिँ नछाड्ने बताए । पहिलो अन्तर्वार्ताको समिक्षा र नयाँ केही धारणासहित हामीले पुन राईलाई अन्तर्वार्तामार्फत […]
‘बाबुराम भट्टराई जस्तो सर्वश्रेष्ठ अरु कुनै नेता छैनन्’ (भिडियोसहित)
Posted on: March 26, 2017April 6, 2017Posted by: मिलन गुरागाईं
कुनै पनि पार्टीमा विवाद आउनु सामान्य कुरा हुने नयाँ शक्ति नेपालका नेता मदन राईले बताएका छन् । पार्टीमा विभिन्न ठाउँबाट आएका वौद्धिक व्यक्तिहरुबीच हुने घर्षणका कारण विवाद हुनु सामान्य भएको नेता राईले जिकिर गरेका हुन् । नयाँ शक्ति पार्टीमा पनि विभिन्न वौद्धिक क्षेत्रबाट आएका मानिसको प्रतिनिधित्व रहेकोले यहाँ पनि केही भित्रि विवाद रहेको उनले उल्लेख […]
एनसेल प्रकरणः पूर्वमिस नेपाल लिम्बू र नागरिक अगुवाले जलाए सीम (भिडियोसहित)
Posted on: March 25, 2017April 6, 2017Posted by: मिलन गुरागाईं
निजी क्षेत्रको मोवाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले सरकारलाई बुझाउन बाँकी रहेको पुँजीगत लाभकर नबुझाएको विरोधमा शनिवार ललितपुरको पाटन दरबार क्षेत्रमा एनसेलको सिम जलाउने कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । नागरिक अभियान नेपालले एनसेलले सरकारलाई बुझाउन बाँकी ३३ अर्ब पुँजीगत लाभकर अविलम्व बुझाउन माग गर्दै विरोधस्वरुप एनसेलका सीम जलाइएको हो । सीम जलाउने कार्यक्रम नागरिक अभियान नेपालको […]
ढुक्क भए हुन्छ, कसैको बाबुले चाहेर पनि एनसेलको ३३ अर्ब कर मिनाहा हुँदैन (भिडियाेसहित)
Posted on: March 24, 2017March 26, 2017Posted by: धुर्ब रिजाल
चैत ११ । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले एनसेलले तिर्नु पर्ने पूँजीगत लाभकर कानुनतः कुनै पनि हालतमा मिनाहा हुन नसक्ने बताएका छन् । मन्त्रिपरिषदमा लैजादै वा अन्य कुनै पनि तिकडम गरेर पनि एनसेल आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन नसक्ने उनले स्पष्ट पारेका छन् । नेपालआजसँगको भिडियो अन्तर्वार्ताका क्रममा खनालले एनसेल र पूँजीगत लाभकरबारे सम्पूर्ण तथ्य खुलासा गरेका छन् । […]
कमल थापा राजनीतिका अश्लिल खेलाडी हुन् (भिडियोसहित)
Posted on: March 23, 2017April 6, 2017Posted by: मिलन गुरागाईं
राजनीतिक विश्लेषक अरुण कुमार सुवेदीको अनुसार नेपालको राजनीतिलाई कमल थापाले बिगत लामो समयदेखि प्रभाव पारिरहेका छन् । सुवेदीले नेपालआजको स्तम्भ कुरा खस्रा मिठामा कुराकानी गर्दै कमल थापा देशको लागि कुहिएको आलु भएको बताएका छन । ‘कमल थापा राजनीतिको मुख्य अश्विल खेलाडी हुन् ।’ विश्लेषक सुवेदी भन्छन्–‘ राप्रपा र कम्युनिष्टहरुले गर्दा देशमा सारा भद्रगोल गरेका छन् […]
संघीयताले देश टुक्रेका उदाहरण पनि छन्, नेपालको संघीयता बैज्ञानिक भएन (भिडियोसहित)
डा. सुनिलकुमार पोखरेल, द्वन्द्व व्यवस्थापन विज्ञ
Posted on: March 21, 2017April 6, 2017Posted by: मिलन गुरागाईं
निजी क्षेत्रको मोवाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले सरकारलाई बुझाउन बाँकी पुँजीगत लाभकर नबुझाएको विरोधमा मंगलबार काठमाडौंको माईतीघरमा प्रदर्शन भएको छ । सार्वजानिक सस्था कर्मचारी संगठन नेपालले एनसेलले सरकारलाई बुझाउन बाँकी ३३ अर्ब पुँजीगत लाभकर अविलम्व बुझाउन माग गर्दै बिरोध कार्यक्रम गरेको हो । विरोध कार्यक्रममा बोल्दै अनेरास्ववियूका पूर्व अध्यक्ष तथा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य […]
Posted on: March 21, 2017April 6, 2017Posted by: धुर्ब रिजाल
नेपालको पहाडी र तराईका जनताबीच फाटो लगाउने काम विदेशीले गरेका हुन्
३३ अर्ब झ्वाम पार्ने ‘प्रचण्ड– एनसेल कनेक्सन’ विरुद्ध सिम जलाउने चेतावनी (भिडियाेसहित)
Posted on: March 19, 2017April 6, 2017Posted by: मिलन गुरागाईं
चैत्र–६ । निजी क्षेत्रको मोवाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले सरकारलाई बुझाउन बाँकी पूँजीगत लाभकर नबुझाएको विरोधमा आइतबार काठमाडौंको भद्रकालीमा प्रदर्शन भएको छ । नागरिक अधिकार अभियानले एनसेलले सरकारलाई बुझाउन बाँकी ३३ अर्ब पुँजीगत लाभकर अविलम्व बुझाउन माग गर्दै बिरोध कार्यक्रम गरेको हो । सरकारले ३३ अर्ब करबाट एनसेललाई मुक्ति दिन खोजिएपछि चौतर्फी बिरोध भएको छ […]
प्यारालासिस, पथ्थरी र ट्युमर कारण बाँच्ने आश मारेकी विष्णुमाया भइन् योगगुरु, १४ वर्षदेखि योगा सिकाउँदै (भिडियाेसहित)
उनलाई एकपल पनि सुख थिएन ।
साझा पार्टीका आश लाग्दा तेज रफ्तारका अब्दुस (भिडियो अन्तर्वार्ता)
Posted on: March 11, 2017April 6, 2017Posted by: धुर्ब रिजाल
फागुन २७ । ५१ वर्षको उमेरमा २२ वर्ष बिबिसी नेपाली सेवाबाट राजीनामा दिएर पत्रकार रवीन्द्र मिश्र राजनीतिमा आउने निर्णय गर्दा ठीक यस्तै खाले निर्णय अरुले पनि लिए । उमेर कम तर प्रभावकारी काम गरेर धेरै मानिसहरुसम्म पुग्न सफल एक २३ वर्षे ठीटो अब्दुस मियाँमाथि मिश्रको नजर केही समयअघि देखि परिरहेको थियो । अब्दुस युथ इनिसियटिभ […]
अरुको इशारमा केपी ओली यसरी उत्तेजित भएका हुन् (भिडियो अन्तर्वार्ता)
विगत डेढ दुई वर्षदेखि झडपको स्थिती आउँछ भनेर मैले अन्दाज लगाउँदै आएको छु । मूलतः यो संविधानकै प्रतिफल हो । यो स्थिती आउँछ भनेर जान्दाजान्दै एमालेजस्तो खारिएको र यति लामो समयसम्म राजनीतिमा रहेको दलका केपी ओली त्यति उत्तेजित भएर सप्तरीमा प्रस्तुत हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । राजनीतिक सभा सम्मेलन गर्नु भनेको सबैको मौलिक र संवैधानिक अधिकार […]
Posted on: March 9, 2017April 6, 2017Posted by: धुर्ब रिजाल
फागुन २६ । नेकपा एमालेका कहिलेकाहीँ उठाउने विषयहरु बडा उत्ताउला हुन्छन् । जस्तो, पार्टीको कार्यक्रममा राष्ट्रिय झण्डा उठाउने कुरा सबै नेपाली जनतालाई सह्य हुने कुरा भएन । दोस्रो कुरा, मधेसमा गएर कार्यक्रम गरेर राष्ट्रवाद जोगिने होइन । यसको अर्थ मधेसका जनताहरु कोही राष्ट्रवादी छैनन् भन्ने अर्थ जान्छ । त्यसले गर्दा मधेसी जनताले हिनतबोध महशुस गर्छन् […]
‘केपी ओली भारतको एक नम्बरको दलाल हो, गधालाई धोएर गाई हुन्न ।’ – सहसंयोजक झा (भिडियोसहित)
Posted on: March 7, 2017April 6, 2017Posted by: admin
– रामचन्द्र झा, सहसंयोजक, नयाँ शक्ति नेपाल नेकपा एमालेले सञ्चालन गरेको मेची-महाकाली अभियान दम्भ प्रदर्शनको अभियान हो । पार्टीका औपचारिक कार्यक्रम, गतिविधि, सभा सम्मेलन भएको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो । तर, देशभरिको शक्ति उतारेर मधेसलाई तर्साउन खोज्ने दम्भ प्रदर्शन स्वभाविक रुपमा दुःखद हुन्छ । पहिला एमालेले राजनीतिक समस्याको सामाधान राजनीतिक ढंगले रोज्नुपर्दथ्यो । संविधाानमा […]
म पनि लाहुरेको छोरी हुँ, बिग्रेकी छु त ? (भिडियोसहित)
Posted on: March 6, 2017April 6, 2017Posted by: धुर्ब रिजाल
बोक्रा मात्रै राम्रो भएर हुँदैन । गुदी पनि हुनुपर्छ
बाबुरामले यस्तै निषेधको राजनीति गर्ने हो भने हामी पार्टी फुटाउँछौं (भिडियो अन्तर्वार्ता)
फागुन २३ । नयाँ शक्तिमा फरक मत राख्ने समूहका अगुवा निर्मल भट्टराईले पार्टीमा निषेधको राजनीति जारी रहे पार्टी टुक्रिन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन स्थगतको माग गर्दै पार्टी संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई र संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेपछि निर्मल भट्टराईसमूहले अर्को विज्ञप्ति जारी गर्दै टक्कर दिएको थियो […]
‘मेरो विवाह नहुनुको मुख्य कारण रेडियो नेपाल पनि हो’ — कोमल ओली (भिडियोसहित)
Posted on: March 5, 2017April 6, 2017Posted by: मिलन गुरागाईं
फागुन २२ । चर्चित लोक गायिका तथा राप्रपाको केन्द्रिय सदस्य कोमल ओलीलाई आज आइतबार औपचारिक रुपमा रेडियो नेपालले बिदाइ गरेको छ । राजनीतिमा होमीन कोमलले रेडियो नेपालको जागिरबाट राजीनामा दिएकी हुन् । राप्रपाको एकता महाधिवेशनमा भारी मत ल्याएर उनी राप्रपा नेपालको केन्द्रिय सदस्यमा नियुक्त भएकी छिन् । आज आइतबार सिंहदरबारस्थित रेडियो नेपालको कार्यालयमा एक विशेष […]
Posted on: March 3, 2017April 6, 2017Posted by: धुर्ब रिजाल
फागुन २० । भारतीय सेनाका पूर्वरथी दीपञ्कर बेनर्जीले नेपाल–भारतसम्बन्ध सुधारतर्फ अगाडि बढेको बताएका छन् । पछिल्लो समय दुई मुुलुकबीच देखिएको चिसोपना क्रमश कम हुँदै गएको बेनर्जीेले बताए । उनले सामान्य विषयहरुले दुई देशको सम्बन्धमा फरक नपार्ने धारणा राखे । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वरथी बेनर्जीले आगामी २० वर्षमा हुने वैज्ञानिक आविष्कार र सम्भावित युद्धबारे […]